के हो सलह ? कसरी नियन्त्रण गर्ने ? | Safal Khabar
के हो सलह ? कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
बुधबार, २१ जेठ २०७७, १३ : ४२
समूहमा बस्ने यो किराले साथीको नक्कल गर्ने गर्दछ । ‘एउटाले जे गर्‍यो अर्कोले त्यही गर्ने बानी हुन्छ । भेडाले अगुवाको नक्कल गरेजस्तै यसले पनि साथीको नक्कल गर्छ । दिउँसो सक्रिय हुने सलह तापक्रम बढेमा राति पनि सक्रिय हुन्छ।
सलह पचासौं किलोमिटरसम्म लाममा उड्छ। ‘हावा जता जान्छ यो पनि त्यतै जान्छ। वयश्क सहलले एकै पटकमा सय दुई सय किलोमिटर यात्रा गर्न सक्छ । एउटा समूहले ३५ हजार मान्छेको खान्की खाइदिन सक्छ ।